China White Oak Amatebhe Double Bed Solid Wood Bedroom Bed # 0113 Ukukhiqiza kanye nefektri | Yamazonhome
Umbhede Wokulala Wama-White Oak Wemisebenzi Emibili Osebenza Ngokhuni Oqinile # 0113
Igama: Umbhede wokulala
Inombolo imodeli: Amac-0113
Usayizi: 1570 / 1870mm * 2100 * 890mm
Umbhede wenziwe ngokhuni oluqinile
I-oki elimhlophe elingeniswe lisuka eNyakatho Melika linokuthungwa okuqinile, ukuqina, nokuqina okuhle. Ngenye yezinkuni ezisezingeni eliphezulu futhi ingcono kunama-oki amaningi abomvu emakethe. Izinhlamvu zezinkuni zicacile futhi zikhanya, ukhuni lubucayi futhi luyimvelo, lilele phezu kwalo, sengathi usekukhulu Ekuhlanganeni kwemvelo, abantu bangalala ngokuthula. Umbhede wezinkuni oqinile ongu-100% awunawo amanye amalayini. Inesimo esijwayelekile ngempela, impahla kanembeza wangempela, isakhiwo esiqinile, nokuhlolwa okungahleliwe okusemthethweni okungahleliwe iminyaka engu-50 yokuqina.
Ihlelwe ngokuqinile umbhede wokhuni oluqinile
Uhlaka lomugqa wepulangwe oluqinile lonke lwanele ukuthwala isisindo somndeni. Lo mbhede ophindwe kabili unesakhiwo esiqinile futhi udlulile isivivinyo sokuthwala umthwalo ongacindezeli. Awudingi ukukhathazeka ngokuqina kokusekelwa futhi ulale ngokuthula. Uhlaka lomugqa lwenziwe nge-oki elimhlophe eliqinile, elinamabhodlela amabili. Sekela imilenze ukusekela ngokuqinile umatilasi.
Isokhethi eliseceleni kombhede
Izikhoxe zokuphepha ezakhelwe phezulu embhedeni, amasokhethi angagcwaliseka kabusha ukucindezeleka. Okungenani ngemuva kwemijikelezo emine Ngingahlangana nani kuphela "ngokuqeqeshwa" okucokeme. Qinisa isakhiwo se-tenon ne-tenon, futhi umthamo othwala umthwalo uzinzile ngokwengeziwe.
Izinga eliphakeme lombhede wehadiwe
Izesekeli ezisezingeni eliphakeme zehadiwe ziqinisa umzimba wombhede, oqinile futhi oqinile, akulula ukugqwala, futhi umbhede wokhuni oluqinile unamandla amakhulu okuthwala. Iphedi elithulekile livimba ipulangwe nesihloko sombhede ekuhlikihleni, futhi lilala ngaphandle kokuphazanyiswa ngomsindo, likuvumela ukuthi ulale kalula. I-backrest enkulu ingafaniswa ngokukhululekile Umcamelo ukhululekile ukuncika kuwo, futhi ukudlala ocingweni akulimazi amehlo akho.
Imilenze yombhede oyindilinga eyodwa
Ngaphansi kombhede kufakwe i-T-beam, izinto zokwakha azicaci, futhi zenziwe ngokhuni oluqinile, ukwesekwa okuphindwe kathathu, ingcindezi yombhede yi-MAX, akukho ukuphenduka, futhi ukulala kuqinisekisiwe. Imilenze yombhede iyajiya, akulula ukuyinyakazisa, futhi akulula ukuyiphula. Yakhelwe ngemuva kocwaningo oluningi Ngokuphakama kombhede okufanelekile, izingane zingahlala kalula kuso, futhi kunesikhala esiningi ezansi ongabeka kuso izicathulo, njll.
Umbhede ophindwe kabili wokhuni oluqinile olula
Umbhede oqinile wokhuni ongakhombisa umoya wokuhlakanipha kusuka ekukhetheni kwempahla ukwakheka
Sifuna izinto zokusetshenziswa emhlabeni jikelele
Kukhethwe ngokucophelela futhi kwatholakala i-oak emhlophe esezingeni eliphakeme kakhulu
Ukuze nje wakhe lobuhlakani obumsulwa
Ukulula nokusebenziseka kuyafana nakho
Langaphambilini Isitolo esidayisa yonke impahla DWF inflatable yoga mat ngokwezifiso ezemidlalo ithrekhi air Gymnastics Tumbling Mat Air Floor 0393
Olandelayo: Umbhede olula we-Windsor Bed Bed Solid Wood Bedroom Bed Princess Princess # 0114
Indawo yokudlela yaseNordic yenze itafula lokudlela lensimbi kanye ...
Computer Desk Simple Desk Modular Ifenisha 0314
I-inflatable Surfboard Sup Racing Yoga Paddle Boa ...
Taekwondo Training Air semibhede Inflatable Air ...
I-Aeliana Small Animal Hutch eneRamp 0243
Igumbi lokuhlala ifenisha yesikhumba ukhuni lwesimanje oluqinile ...